Mpanamboatra sy mpamatsy diviziona China | KAIHUA
Vahaolana sy famolavolana bobongolo ho an'ny fako, pallet, vata sns Ny ankamaroan'ny bobongolo dia aondrana any amin'ny mpanjifa any amin'ny tsenan'i Eropa sy Amerika. Amin'izao fotoana izao dia afaka manome mavesatra bobongolo mavesatra hatramin'ny 90T isika.
Afaka manamboatra bobongolo vovoka isika manomboka amin'ny 40L ka hatramin'ny 3200L. Miaraka amin'ny traikefa manankarena azontsika isan-taona, ny lasitra azontsika dia mety hanana fotoana fohy sy vanim-potoana lava be. Afaka manome vahaolana amin'ny famolavolana ireo boaty indostrialy ary koa vata fiompiana lehibe izahay. Amin'ny alalàn'ny fandinihana lalina ny fomba fanovana kinova mora foana, dia manampy ny mpanjifanay izahay hitahiry ny lasitra sy ny vidin'ny famokarana. Tsy maninona na kely, mora paofy fametahana na paleta madio sy milamina ho an'ny sakafo, fizarana fahadiovana. Ny lasitra ataontsika dia miorina amin'ny fotoana fohy ary koa ny fanovana mora foana. Mandritra izany fotoana izany, afaka manome serivisy ho an'ny famakafakana famoahana mavitrika sy tsy miovaova isika.
Ny lasitra tsara dia mitoetra voalohany amin'ny famolavolana tsara.
Amin'ny alàlan'ny fikarohana miaraka amin'ireo mpiara-miasa tsara eto an-toerana sy iraisam-pirenena, ny ekipa mpamolavola antsika dia tsy vitan'ny 2D, vokatra 3D ary famolavolana bobongolo fa mitondra lanjany lehibe toy ny "efficace" sy "lightweight" araka izay azo atao amin'ny mpanjifanay.
Ekipa mpamolavola vokatra: manampy ny mpanjifa izahay amin'ny famolavolana ny lafiny B sy ny fanadihadiana azo atao. Miaraka na tsy misy famolavolana, afaka mamolavola ny famolavolana vokatra miorina amin'ny fepetra takiana isika.
Ekipa CAE: manao fikarohana miaraka amin'ny mpanjifanay, toa ny famakafakana ny famakafakana, ny famakafakana ny tanjaka, ny simika na ny fanaingoana sns.
Ekipa mpamolavola bobongolo: miantehitra amin'ny traikefa manan-karena sy rindrambaiko matihanina, afaka mamaly haingana ny filan'ny mpanjifa isika ary mamorona endrika izay mora milina, mora ampiasaina, mora hitazona, ary azo antoka ny famokarana.
■Vondrona CNC axis 5: DMG avy any Alemana, OKUMA ary MAKINO avy any Japon, FIDIA avy any Italia. Max.stroke dia 4000 × 2000 × 1100mm
■Vondrona EDM: DAEHAN foibe fanodinana EDM avo roa heny sy efatra avy any Korea. Max.stroke dia 3000 × 2000 × 1500mm
■Milling centre: Ivotoerana famolavolana kiraki mitsivalana sy mihodina avy any Japon. Max. Ny halalin'ny fanapahana dia 1100mm.
■Vondrona CMM: WENZEL avy any Alemana, HEXAGON avy any Suède ary COORD avy any Italia. Max. Ny fikolokoloana dia 2500 × 3300 × 1500mm.
■Ny hafa: Fitaovana fanandramana mandanjalanja SCHENCK avy any Alemana, fitaovana fitsapana henjana avy any Etazonia, milina fanaraha-maso manana taha, rano & milina fanaraha-maso miharo hydraulic.
■Vondron-kintana: hatramin'ny 500T
■Masinina tsindrona: Krauss maffei avy any Alemana, HAITIAN, YIZUMI. Hetsika parallèle, clamping magnet / clamping hidrolika, miaraka amina robot 5-axis, reto ho an'ny Mucell, hatramin'ny 3300T.
Teo aloha: Fizarana fiara